छोटकरीमा : आज- २०७७ मंसिर ०५, शुक्रबार
आज 'केन्द्रमा २४ हजार, प्रदेशमा ५४ हजार प्रहरी समायोजन हुँदै', 'छठ पर्व : अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइयो', 'पेट्रोल चोरी प्रकरण : थप अनुसन्धान गरिदिन सीआईबीलाई पत्राचार', 'युगान्डामा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा १६ जनाको मृत्यु' लगायतका विषयवस्तुहरूलाई समावेश गरिएका छन् ।
शुक्रबार १,९४५ जना थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या २,१६,९६५ पुगेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या १,२९८ पुगेको छ। हालसम्म नेपालमा १,९१,००२ जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्।
=> PCR Tests Today: १०,३४० => Recovered Today: ५,३६४
पार्टीभित्र देखापरेको विवाद मिलाउन नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटी सचिवालयमा दाहालले राखेको राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।
पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा भएको भेटमा महासचिव पौडेलले संयुक्त प्रस्ताव बन्न नसके पार्टी दुर्घटनातर्फ जान सक्ने खतरा पनि औँल्याएको स्रोतले जनाएको छ ।
महासचिव पौडेलको अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रस्ताव : एकल प्रस्ताव फिर्ता लिनुस्, संयुक्त प्रस्ताव ल्याउनुस्
प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पार्टीको आगामी १४औँ महाधिवेशनको तयारीका लागि नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको विवरण यही मंसिरभित्रै केन्द्रमा पठाउन जिल्ला सभापतिलाई निर्देशन दिएको छ ।
कांग्रेसको गत २८ कात्तिकको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणसम्बन्धी विवरण केन्द्रमा पठाउन सबै जिल्ला सभापतिलाई २ मंसिरमा निर्देशन गरिएको पार्टी मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
क्रियाशील सदस्यता विवरण पठाउन जिल्ला सभापतिलाई कांग्रेसको निर्देशन
सहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले धोबीखोला करिडोरको निरीक्षण गरेपछि सडकमा बनेका खाल्डाखुल्डी एक हप्ताभित्र पुर्न निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार मन्त्रीको नेतृत्वको टोलीले धोबीखोला करिडोरको दाँया र बायाँ गरी २४ किलोमिटर सडकको भौतिक अवस्थाबारे स्थलगत निरीक्षण गरेको छ ।
प्रदेश सरकार बनेको तीन वर्षपछि बल्ल प्रहरी समायोजनको अन्तिम तयारी सुरु भएको छ । बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्र र प्रदेशमा रहने प्रहरीको संख्या टुंगो लगाएसँगै समायोजन अगाडि बढाउन लागिएको हो ।
समायोजनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको र केही दिनपछि नै काम सुरु गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसरी हुँदै छ प्रहरी समायोजन : केन्द्रमा २४ हजार, प्रदेशमा ५४ हजार प्रहरी
चुनावी गठबन्धन हुँदै पार्टी एकतासम्मको तीन वर्षमा अनेकौं उतारचढाव, आरोप–प्रत्यारोप र मनमुटाव भए पनि नेकपामा भिन्दाभिन्दै राजनीतिक प्रस्ताव लेखन भएको थिएन । यो इतिहास तोडेर नेकपाले पहिलो पटक दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले भिन्दाभिन्दै राजनीतिक प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने औपचारिक निर्णय लिएको छ ।
नेकपा विवाद : दुई प्रस्ताव भए के बहुमत-अल्पमतका आधारमा निर्णय हुन्छ ?
छठ पर्वको मुख्य दिन शुक्रबार अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएर मनाइएको छ । कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने छठको आज मुख्य दिन हो । भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएपछि छठ समापन हुने गर्दछ ।
पेट्रोल ढुवानी गर्ने ट्यांकरमा फल्स चेम्बर बनाई इन्धन चोरी गरेको फेला परेपछि नेपाल आयल निगमले थप अनुसन्धान गरिदिन नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी)लाई अनुरोध गरेको छ ।
सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने तय भएका ५ देखि १५ शैयाका अस्पताल निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरेको छ। अस्पतालको नाममा जग्गा नभएमा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत् भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा लिजमा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो।
प्रत्येक स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
चिसो बढेपछि कर्णालीको माथिल्लो डोल्पा र हुम्लाका सात प्रहरी चौकी सदरमुकाममा विस्थापित भएका छन् । अत्यधिक हिमपात हुने भएकाले झन्डै ६ महिना उच्च हिमाली क्षेत्रका चौकी खाली हुने गरेका छन् ।
चिसो बढेपछि डोल्पा र हुम्लाका ७ प्रहरी चौकी विस्थापित
दस दिन सचिवालय बैठक स्थगित गरेर सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले पार्टी विवाद सुल्झाउन फेरि संवाद थालेका छन् । शुक्रबार पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकल दाहाल र महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङबीच छुट्टाछुट्टै संवाद भएको छ ।
दाहालले नेम्वाङसँग भने–‘एकता जोगाउन मेरो तर्फबाट सकारात्मक भूमिका रहन्छ’
सन्तोषकुमार ढकाल र सहदेव खड्कालाई प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले शुक्रबार जंगी अड्डामा आयोजित एक कार्यक्रममा उपरथी दर्जाको दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरेका छन् । मंसिर ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले ढकाल र खड्कालाई सहायक रथीबाट उपरथीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका–१२ मा स्थित जोगबुढा आमपानीका ६/७ जना राउटे युवा चिया पसलमा गफिँदै थिए । उनीहरूसँग कुरा गर्न खोज्दा एकएक गर्दै जुरुक्क उठेर गए । कसैले कुरा गर्न खोज्यो कि राउटे युवा यसरी नै रिसाएर हिँड्छन् ।
राउटे युवा दोधारमा
गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका ३३ जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक(एसएसपी)को सरुवा गरेको छ । शुक्रबार गृहमन्त्रीस्तरको निर्णयबाट विभिन्न स्थानमा कार्यरत एसएसपीको सरुवा गरिएको हो ।
३३ एसएसपीको सरुवा : काठमाडौंमा अशोक सिंह, ललितपुरमा किरण बज्राचार्य (सूचीसहित)
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मालपोत कार्यालय वालिङलाई नमुना कार्यालय घोषणा गरेकी छन् । मन्त्रालयको देशैभरका मालपोत र नापी कार्यालय प्रविधिमैत्री, सेवाग्राहीमैत्री बनाउने अभियानअन्तर्गत आज (शुक्रबार) मालपोत कार्यालय वालिङलाई नमुना घोषणा गरेकी हुन् ।
देशैभरका मालपोत र नापीमा प्रविधिमैत्री सेवा पुर्‍याउँछौं : मन्त्री अर्याल
मैथिल समुदाय अहिले छठमा ब्यस्त छ । चारदिनसम्म विभिन्न विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरि मनाइने यो पर्व विशेषगरि छोरा प्राप्तिका साथै पारिवारिक सुख र समृद्धिका लागि मनाउने गरिन्छ । सांस्कृतिक र धार्मिक रुपमा निकै महत्व राख्ने यस पर्वसँग जोडिएर आउने अर्को महत्वपूर्ण पाटो मिथिला कला पनि हो ।
भित्ताबाट क्यानभास, कागज तथा कपडामा विस्थापित मिथिला कला
उगान्डाको राजधानी कम्पालामा बुधबार भएको हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु हुनेको संख्या १६ जना पुगेको छ। राष्ट्रपतिका विपक्षी उम्मेदवार रोबर्ट क्यागुलानीलाई गिरफ्तार गरेको विरोधमा भएको प्रदर्शनले हिंसात्मक रुप लिएपछि प्रदर्शनमा उत्रिएका व्यक्तिहरुको मृत्यु भएको हो।
जोर्जिया राज्यमा गरिएको पुन: मतगणनामा पनि जो बाइडेन विजयी भएको चुनाव अधिकारीले जनाएका छन् । जोर्जिया राज्यका सचिवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनले वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई जितेको उल्लेख गरिएको छ ।
जोर्जियाको पुन: मतगणनामा बाइडेन नै विजयी
केन्यामा बच्चाहरु बिक्री गर्ने कालो बजारलाई निरन्तर आपूर्तिकै लागि अन्धाधुन्ध रुपमा बच्चा चोरी भइरहेको छ । अफ्रिका आई टिमले एक वर्षसम्म एक तस्करलाई पछ्याएर यो रिपोर्ट तयार गरेको हो । केही बच्चाहरु मात्रै ३० हजार रुपैयाँमा बेच्‍न चोरी भइरहेका छन् ।
जहाँ आमाको काखबाट बच्चाहरु चोरेर बेचिन्छन्...
छोटकरी सम्पादक7घण्टा पहिले
ताप्लेजुङको दोभान बजारमा लागेको आगो नियन्त्रणमा, ४९ घर जलेर खरानी
ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिका–३ स्थित दोभान बजार लागेको आगो नियन्त्रणमा आएको छ । आगलागीबाट दोभान बजारका ४९ घर जलेर नष्ट हुँदा डेरा गरी बसेकासहित ७१ परिवार विस्थापित भएका छन् । कसरी लाग्यो आगो ?
फेवातालको नयाँ क्षेत्रफल प्रश्नको घेरामा, १५ सय ४५ रोपनी क्षेत्रफल घटेको दाबी
फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्गकिलोमिटर अर्थात् ११ हजार दुई सय ५५ रोपनी ११ आना एक पैसा छ ।
कोरोनाविरुद्धको थप ५० लाख डोज खोप खरिद गर्दै सरकार
सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको ५० लाख डोज खोप खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । दोस्रो चरणको खोप कार्यक्रम सरकारले फागुन २३ गतेदेखि सुरु गर्न लागेको छ । जसमा ५५ वर्ष र माथिका नागरिकलाई लगाउने तयारी सरकारको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई ‘सुरक्षा थ्रेट’ : प्रोपोगाण्डा कि वास्तविकता ?
'अत्‍यन्तै तीब्ररूपमा प्रहार भएको छ। शारीरिक हमला नै भयो र ज्यान नै तलमाथि भयो भने अनौठो नमान्नु होला।' मुलुकको कुनै सामान्य नागरिकको त्रासमय अभिव्यक्ति होइन यो। यसप्रकारको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाटै आएको हो। जम्बो सुरक्षाकर्मीको घेरामा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई के कारण भयो सुरक्षा थ्रेट?
चीनले नेपाललाई अनुदानमा दिने कोभिड–१९ को खोप संख्यालाई बढाएर आठ लाख डोज पुर्‍याएको छ । चीनले सरकारी कम्पनी सिनोफार्मले उत्पादन गरेको भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो । जसलाई नेपालमा पनि प्रयोग गर्नको लागि नेपाल सरकारले स्वीकृति दिइसकेको छ ।